Doka | Vaovao momba ny dia
ankehitriny Vaovao momba ny dia, an'ny Network Blog News Blog, tsy mitsaha-mitombo ny isan'ny fitsidihany, izy rehetra avy amin'ny olona liana amin'ny fampahalalana momba ny dia sy fizahan-tany amin'ny ankapobeny. Ity no karazana mpihaino tadiavinao amin'ny alàlan'ny dokam-barotrao.
Azonao atao ny mifandray aminay amin'ny endrika manaraka.
Manaiky ny Politika fanodinana data.
Rehefa mandefa takelaka iray dia angatahina ny angona toy ny mailakao sy ny anaranao, izay tehirizina ao anaty cookie mba tsy hamitanao azy ireo indray amin'ny fandefasana azy any aoriana. Amin'ny fandefasana endrika iray dia tsy maintsy ekenao ny politikanay momba ny tsiambaratelo.
Tanjon'ny data: valio ny fangatahana voaray ao amin'ilay endrika
Legitimation: Ny fanekenao mazava
Zo: fidirana, fanitsiana, famafana, ferana, famindrana ary manadino ireo angon-drakitrao